သငျသညျလုံးဝနှင့်ငြီးငွေ့ရရှိမှုညမ်းဂိမ်းကစားပလက်ဖောင်း? သင်ပြုချင်ပြီးမှအဆိုပါနေရာများသွားရောက်ကြည့်ရှုသောမပေးပါဘူးသင်သည်အပြည့်အဝထိန်းချုပ်ကျော်အတွေ့အကြုံနဲ့တသမတ်တည်းအရှုံးမပေးဖို့သင်အပူၾကာင္းဂိမ်းကစားခြင်းအစည်းအဝေး? သို့ဖြစ်ပေါ်လာဖို့အတွက်တမ်းပလိတ်ညမ်းဂိမ်း! ကတည်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်၊ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်ခဲ့ဖူးကျယ်ကျယ်သောသေချာစေရန်လူတိုင်းကြွလာဒီမှာရရှိသွားတဲ့အတိအကျအဘယ်အရာကိုသူတို့ချင်တယ်:အလွန်ကြီးစွာသောညမ်း။ အစပိုင်းတွင်ဇူလိုင်လထဲမှာစတင်ခဲ့၏၂၀၁၅၁၀ ဂိမ်းများနှင့်အတူ၊ငါတို့သည်ယခုရှိသည်အစာ၏၃၀ ခေါင်းစဉ်ကြိုးစားနိုငျသောခံစားကနေတိုက်ရိုက်။။။။။, ပါကကျွန်ုပ်တို့၏ပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါသည် ၁၀၀%အခမဲ့ပူးပေါင်းနှင့်ပျော်မွေ့:ဒါဟာအမြဲတမ်းဖြစ်လိမ့်မည်! ကျွန်တော်ပြေးအပေါ်တစ်ဦး freemium မော်ဒယ်ပေးသည်သောတိုက်ရိုက်ဝင်ရောက်ရန်ပစ္စည်းကိုအဘယ်သူမျှကန့်သတ်မှုနှင့်အတူ၊သင်အမှန်တကယ်ချင်တယ်ဆိုရင်၊သင်လုပ်နိုင်နှင့်အတူအမျိုးမျိုးသော microtransactions။ ကျနော်တို့စိတ်ချယုံကြည်ကြောင်းချစ်ကြတာပေါ့အဘယျသို့ဖွင့်အတွင်းအကြောင်းအများကြီးသင်ဖို့ဆန္ဒရှိဖြစ်ဆန္ဒအလျောက်အထောက်အကူလိုအပ်ကြောင်းမပါဘဲငါတို့အဘို့အဝယ်လိုအားပေးဆောင်! စိတ်ချပါငြိမ်ဝပ်စွာနေဒီလမ်းကိုကျွန်တော်တော်တော်အများကြီးအာမခံချက်ကျေနပ်မှု။, ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့၊လျှင်မသင်ပေးနှင့်အတူအခမဲ့ဂိမ်းများကိုသင်အမှန်တကယ်ပျော်မွေ့သောကစား၊သင်ဖြစ်နိုင်မည်မဟုတ်နေဖို့နှင့်အကျိုးသည်တခြားနေရာသင်၏နေ့စဉ်ဆေးထိုး၏ေဖ်ာ္ေျဖေရး!
အမျိုးမျိုးအမွှေးအကြိုင်များ၏အသက်ကိုအဘယ်ကြောင့်ဟူဖြစ်ပါသည်၊အသင်းမှာတမ်းပလိတ်ညမ်းဂိမ်းများအလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီအချိန်မှဘုန်းတော်ကြီးတစ်ဒေတာဘေ့စ၏ခေါင်းစဉ်တွေကိုအမှန်တကယ်လိမ့်မည်ေရညစ်ညမ်းဂိမ်းများလာမည့်အဆင့်အထိ။ ကျနော်တို့ပစ်မှတ်ထားရန်အချို့စွမ်းဆောင်ရည်အညွှန်းကိန်းများထဲမှအရေးအပါဆုံးအမှုအရာသည်ငါတို့အဘို့အကြွင်းမဲ့အာဏာအမျိုးမျိုး၏ခေါင်းစဉ်အတွက်အများအပြားကွဲပြားခြားနားသောရှုထော။ ကျနော်တို့အကြောင်းပြောနေတာမျိုးအစား၊အခက်အခဲနှင့်အနုပညာချဉ်းကပ်မှုမှာ။ အဘယ်သူမျှမနှစ်ခုအတွင်းကျွန်ုပ်တို့၏စာကြည့်တိုက်အတူတူပါပဲ။ ပိုပြီးဖွင့်အဘယျသို့၊နှင့်အတူများစွာ၏ရွေးချယ်မှုများ၊သင်ရရှိပါသည်နာရီရာပေါင်းများစွာ၏ဂုဏ်ပျော်စရာသင်တို့အဘို့အစောင့်ဆိုင်းနေအခြားဘက်ခြမ်းအပေါ်!, ငါတို့သည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်အတူထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ဝင်များနှင့်အဆက်မပြတ်သူတို့ထံမှသင်ယူရန်လည်း:သေချာစေရန်ကျွန်တော်တို့ကိုသိစေအဘယ်အရာကိုသင့်ရဲ့ထင်မြင်ချက်သည်ငါတို့၏စုဆောင်းမှုများကိုဝေဖန်မှုများအပေါ်အဆိုပါအရာရှိကဖိုရမ်များ! င့်အရေးကိုရေရှည်တည်တံ့၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွန်ယက်အဖွဲ့ဝင်များကျွန်တော်တို့ကိုသိစေအဘယ်အရာကိုသူတို့စဉ်းစားနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကြောင်း၊ငါတို့သည်မဏ္ဍိုင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချဉ်းကပ်မှုအပေါ်မူတည်ပြီးသူတို့ရဲ့မျှော်လင့်ချက်များ။ ငါတို့သည်တည်ရှိနေများကိုနှင့်အတူကမ္ဘာ့အဆင့်အတန်းအရွယ်ရောက်ပြီးသူအားကစားပြိုင်ပွဲလျှင်၊ဒါကြောင့်ကျနော်တို့လုပ်နေတာမဟုတ်၊တစ်ခုခုသွားပြီအရမ်းမှား! အိုး၊နှင့်သေချာဖြစ်စကားလုံးဖြန့်ဖို့အပေါင်းတို့၏သွေးကြော:လူအတက်လက်မှတ်ထိုးရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ဂိမ်း၊ပိုကောင်း!
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကားသည်လူအပေါင်းတို့သည်အမြင်အာရုံအယူခံဝင်၊ကျွန်တော်တို့သိတဲ့ခေါင်းစဉ်ရှိသည်မယ်လို့အဖြစ်အမြင်အာရုံရင်သပ်ရှုမောဖွယ်နိုင်ရန်အတွက်အယူခံပရိတ်သတ်များကျယ်ပြန့်လာခဲ့သည်။ ကြၽန္ေတာ္တိုငှားရမ်းအကောင်းဆုံးအမည်များအတွက်စီးပွားရေးနှင့်လိုက်သည်ကားကျွန်တော်ထင်ခဲ့တဲ့အသွား-မှထုတ်လုပ်သူများ၏အံ့သြဖွယ်ညစ်ညမ်းအနုပညာ။ ကနေစိတ်ကြိုက်ပုံဖော်အင်ဂျင်နှင့်ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်နာများအားဖြင့်ကို ၃D ရုပ်ရှင်ကောင့်နှင့်ရန်:ကျနော်တို့လုပ်ထားပါတယ်သေချာပါဤသည်ထိပ်တန်း-ထစ်အချာနှင့်အတူအများဆုံးအံ့သြဖွယ်ညစ်ညမ်းဂိမ္းဗေ။ ခင်ဗျားချစ်သွားအဘယ်အရာကိုသင်ရှာဖွေအတွင်းအပြင်နှင့်ကျွန်တော်ဂတိတော်နှင့်သင်ချစ်ကြလိမ့်မယ်အပေါင်းတို့၏အမော်ဒယ်များနှင့်ဒေသများကျွန်တော်တို့ဖန်တီးပြီးပြီ။, မှတ်ချက်မှာလည်းအမျိုးမျိုးမှာကတည်းက၊ကျနော်တို့အလုပ်ခန့် ၄ အပြည့်အဝ-အချိန်အကြောင်းအနုပညာရှင်အတွက်ကူညီဖန်တီးဒီဂိမ်း။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့၊ဒါကြောင့်အသင့်လျော်ပလက်ဖောင်းသင့်ပြေးလျှင်လိုလားအားထားမှကိုယ်နှိုက်ကဒီမျဉ်း၏အရွယ်ရောက်ပြီးပစ္စည်း။ အများကြီးသွေး၊ချွေးနဲ့မျက်သို့သွားလေ၏ဖန်တီးဤခေါင်းစဉ်များ–သူတို့ကိုခံစားနှင့်သေချာအောင်အားလုံး၏ကြိုးစားအားထုတ်မှုမပါဘူးသွားဖြုန်း! ကျနော်တို့စိတ်အားထက်သန်နေကြောင်းသေချာစေရန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အများဆုံးတန်ကြေး၊သီးသန့်ခေါင်းစဉ်များမှာအားဖြင့်ကစားလူတိုင်း။
သငျသညျရှိတယ်ဆိုတာကိုသိရခဲ့တစ်ခုသပ္ပါယ်ဂရပ်ဖစ်အင်ဂျင်အစိတ်အပိုင်းမှာတမ်းပလိတ်ညမ်း။ အဘယျသို့ကဒီကိုဆိုလိုသည်သင်အဘို့အကြောင်းမခွဲခြားဘဲများ၏စွမ်းဆောင်ရည်သင့်စက်၊သင်ရှိသည်လိမ့်မယ်အဘယ်သူမျှမကိစ္စရပ်များကိုထွက်ကြိုးစားနေကျွန်ုပ်တို့၏၃၀+ဂိမ်းများ။ အဘယ်အရာကိုဖစ္ၿပါဘူးအသိဉာဏ်ထွက်အလုပ်လုပ်လျှင်သင့်ရဲ့္နှင့် GPU လျက်ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများလည်းအကြီးအကျယ်၊အခြေအနေများတွင်သူတို့ဖြစ်လာတစ်ဆို့၊သူတို့လျှော့ချပါလိမ့်မယ်ဝယ်လိုအားလျှော့ချခြင်းဖြင့်တစ်ဦးချင်းပိုင်ဆိုင်မှုအရည်အသွေးနှင့်ဖယ်ရှားခြင်းအချို့သောအဓိကမကျတဲ့နောက်ခံပုံရိပ်တွေနေတာပါကြောင်းသေချာစေရန်အစောင့်တစ်ဦးမှန်မှန် framerate။, အဆိုပါနည္းပညာသည္အလျောက်တပ်ဆင်ထားပြီးလောလောဆယ်၊ပတ်ပတ်လည် ၁၅%၏အသုံးပြုသူများအသက်ဝင်မှာအနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်တိုင်းနာရီ။ အဆိုပါသပ္ပါယ်ဂရပ်ဖစ်အင်ဂျင်လည်းဆိုလိုကြောင်းသင်နိုင်ကစားရန်ဤဂိမ်းမှသင်၏မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်ပေးနေနိုင်စွမ်းရှိခြင်း Chrome၊မြေခွေးမှာသို့မဟုတ်ဆာဖာရီအပြေး။ ဤဘြတ္သုံးမယ်တရားဝင်ထောက်ပံ့၊သင်မူကား၊ရှာတွေ့စေခြင်းငှါ၊အခြားသူများအပြေးကြလိမ့်မည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်းရုံဒဏ်ငွေ။ ကတည်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆာဗာများလည်းတပြိုင်တည်းတိမ်ကယ်တင်ခြင်း၊စောင့်ရှောက်နိုင်အောင်သင့်ရဲ့တိုးတက်မှုအခါမှှုကနေမိုဘိုင်းကွန်ပျူတာလွန်း–တော်တော်ချိုမြိန်၊အယ်?
ဒါဟာအလွန်အရေးကြီးသည်ငါတို့အဘို့သေချာအောင်ကျနော်တို့စောင့်ရှောက်ဖို့အတမ်းပလိတ်နှင့်ပတ်သက်တမ်းပလိတ်ညမ်း။ ဒါဘာကိုဆိုလိုတာပါ၊အတိအကျ? ကောင်းစွာ၊ကျွန်တော်တို့ဟာယုံကြည်ဖို့စွမ်းရည်ကိုချွတ်သွားနှင့်စေသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စွန့်စားမှုအရေးကြီးသည်။ တမ်းပလိတ်ဂိမ်းပေါ်တွင်တည်ဆောက်၏အခြေခံအုတ်မြစ်သင်နိုင်ဖြစ်ခြင်းသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ရိုက်ချက်နှင့်ပျော်မွေ့သောအရာတို့ကိုချင်တယ်ဘယ်လို။ ဤခေါင်းစဉ်ကိုပူဇော်ကြလိမ့်မည်ကြောင်းပြဿနာဖြေရှင်းနည်းများနှင့်မျိုးစုံလမ်းကြောင်းမှပွဲ၊အဖြစ်အများအပြားရွေးချယ်မှုများနှင့်ပတ်သက်ချင်သလဲဆိုတာကိုမင်းအပေါင်းတို့၏အ NPCs ပြီနှက်ပတ်ပတ်လည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်းကမ္ဘာ။, သင်ရတာပေါ့မယုံနိုင်လောက်အောင်ပူနှင့်သွေးကြောဖြစ် trundle မှတဆင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်နှင့်ကိုယ်အဘို့ကိုတွေ့မြင်ဘာဂိမ္းချမ်းသာသင်တို့အဘို့အစောင့်ဆိုင်းနေ။ အတွက်အများကြီးအဆိုပါခေါင်းစဉ်အပေါ်ဒီတမ်းပလိတ်ညမ်းဂိမ်းများ၊သင်သည်သင်၏ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုကိစ္စ။ သင်ပယ်ဖြတ်လမ်းရှိသည်နိုင်သွားပြီးအသစ်ဖန်တီးသူများအပေါ်ဆုံးဖြတ်ခြင်းသည့်အခါအမျိုးမျိုးသောအမှုအရာ၊ဒါကြောင့်အာရုံစိုက်ပြီးသေချာမရေဟောင်းကိုချွတ်အမှားကလူ! ကျွန်မတို့ဟာတိပေါက်ကွဲမှုချကျွန်တော်တို့ရဲ့စုဆောင်းမှုအတူတကွ–ဘာဖြစ်လို့မလာပူးပေါင်းပြီးဤလက်ငင်းနှင့်အရာကိုကြည့်ရှုခဲ့ကြရတယ်။ သိကအာရုံစေသည်!